वि.सं २० जेष्ठ २०७६, सोमबार ०९:५०
धरान लगायत नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा डेङ्गुको आतंक छ । डेङ्गु के हो ? डेङ्गुबाट कसरी बच्ने? र लामखुट्टे भगाउने तरिका लगायतका बारेमा यस लेखमा हामी चर्चा गर्नेछौं ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा डेङ्गुका बारेमा हामीले न त सुनेका थियौं, न त पढेका नै थियौं तर आजसम्म आइपुग्दा यो झन्डै महामारीको अवस्थामा देखिन थालेको छ। सन् २०१२ मा झापामा व्यापक रुपमा डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो।
अहिले पनि धरानमा ७५ जनाभन्दा बढी यसको शिकार भई सकेका छन्। त्यसैले आज हामी डेङ्गु के हो ? र डेङ्गुबाट कसरी बच्ने ? यसै सन्दर्भमा गहिरिएर लाग्दैछौं।
डेङ्गु के हो ?
प्रत्यक वर्ष वर्षातको दिनमा डेङ्गुको प्रकोप फैलन शुरु हुन्छ । डेङ्गु एक भाइरसद्वारा लाग्ने संक्रमण हो, जुन एडिज नामको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने गर्दछ। विभिन्न प्रकारका एडिजमध्ये एडिज एलवोपिक्टस र एडिज एजेप्टी(aedes agypt) मुख्य हुन्।
लामखुट्टेको मुखमा dengue virus हुन्छ जो मान्छेलाई टोकेपछि मुखमा जान्छ र मान्छेलाई डेङ्गु रोग लाग्छ । यो virus शरिरभित्र पुगेको ३ देखि ५ दिन भित्र असर देखिन थाल्छ । डेङ्गुयुक्त लामखुट्टे सफा पानीमा रहन्छ र धेरै उचाइमा उड्न सक्दैन ।
घरबाट मात्र होइन समुदायबाट नै लामखुट्टे कसरी भगाउने ? लामखुट्टेबाट बच्ने उपाय
यसका लक्षणहरु ३ किसिमका रहेका छन् ।
डेङ्गु भाइरल संक्रमण हो। प्राय: भाइरल संक्रमणमा हामीले लाक्षणिक तथा सहयोगी उपचार प्रक्रिया अपनाउने गर्दछौं। यसको आफ्नै एन्टीभाइरल औषधि भने छैन। चाँडोभन्दा चाँडो रोगको पहिचान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। समयमै उपचार शुरु गर्दा जटिलता र मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ।
साधारण खाले डेङ्गु रोगमा मरिचको प्रयोगले paracetamol medicine ले आराम दिन सक्छ । तर यो कुरा याद राख्नु पर्छ कि, यस्तो बेला मरिचको प्रयोग सँगै aspirin tablets भने विल्कुल दिनु हुँदैन किनकी यसको सेवनबाट रगतमा platelets कम हुने खतरा हुन्छ । शुरुको लक्षणको आधारमा मात्रै आफूलाई कुनखाले डेङ्गु रोग लागेको हो पत्ता लगाउन मुस्किल हुन्छ । त्यसकारण तत्काल उपचारको लागि डक्टरकहाँ जानु पर्छ ।
डेङ्गुबाट कसरी बच्ने घरेलु उपाय
क. लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, कुलेसो र खोल्साहरुमा मट्टितेल र पेट्रोल छर्कने ।
डेङ्गु रोग लाग्दा के खाने?
कागतीको रसले रगतमा भएको विषालु पदार्थलाई पिसावको माध्यमबाट बाहिर निकाली रगतलाई सफा गर्दछ । यसकारण डेङ्गुको रोगीको लागि कागतीको रस धेरै लाभदायक सावित भएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
औलो रोगबारेमा जानकारी लिन यो भिडियो हेर्नुहोस:-
लामखुट्टे भगाउने तरिका यस लेखमा दिइएको छ थाहापाइ राख्नुस आफु पनि बाच्नुस अरूलाइ पनि बचाउनुस
यसरी भगाउनुहाेस लामखुट्टे
लामखुट्टे कसरी भगाउने
लामखुट्टे भगाउने घरेलु उपायहरू
लामखुट्टे भगाउने तरिका
विबाह गर्नुहुदैछ ? बिहेको निम्तोमा अब उमेर खुलाउनुपर्ने
पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै सिरहा लगायत तराईमा ‘वट सावित्री’ पर्ब मनाईदै
वि.सं १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १८:३९